म कसरी गद्दार ? - NepalDut NepalDut
म कसरी गद्दार ?
बालकृष्ण ढुंगेल ओखलढुंगा
साथीहरू म मल बनेर मुला सपार्नुभन्दा जीवन खोज्नु पर्छ भनेर जीवन खोजिरहेछु । तपाईंहरुले मेरालागि खर्चिनु भएको माया, सद्भाव, सहयोग र समयलाई मात्रै हिसाब नगर्नु होला ।
मैले गरेको योगदान, मैले बेहोरेको अपमान मैले भोगेको यातना ।, दुष्मनको यातना र लुटमात्रै होइन, आफ्ना भनिएका, भनाइएका बनेका र बनाइएकाबाट लुटिदा मेत मैले तपाईंहरुको बिश्वास टुट्न नदिन नखपेको हैन । तर म आज तपाईंहरुसँग छैन ।
मलाई सराप्नुअघि क प्रचण्डलाई सोधनुस् ।
बालकृष्ण किन हामीसग रहेन्न, किन लार्क्याल लामा हाम्रा हुदा बालकृष्ण र बालकृष्णहरु लखेटिएका छन् ? किन उनी हाम्रा रहेनन् ? सोध्नुस् एकपटक । मेरालागि होइन, तपाईहरु मजस्तै नहुनलाई पनि सोध्नुस् ।
दुष्मनको यातना र लुटमात्रै होइन, आफ्ना भनिएका, भनाइएका बनेका र बनाइएकाबाट लुटिदा मेत मैले तपाईंहरुको बिश्वास टुट्न नदिन नखपेको हैन । तर म आज तपाईंहरुसँग छैन ।
तपाईंहरुले मेरो दिन भोग्नु नपरोस् । मृतक होइन, सहिद, द्वन्द्व होइन, युद्ध, अपराधि होइन, योद्धा बनाउन सफल बन्नुस्। अ योगे होइन योग्य बनाउन र बन्न पनि पहिला नै सोध्नुस् । जनयुद्धको पहिलो सहिद देखिन अन्तिम सहिद सबै मृतक बनेजस्तो अब के बनिन्छ ? सोध्नुस ।
सहिदको रगतले मलाई होइन, मृतक बनाउनेलाई सरापिरहेछ र सरापि रहनेछ। हो तेहि सोधेको राम्रो । प्रचण्ड ओलीको कार्यकर्ता बन्दा कसरी लाल थिय ? आज म बन्दा कसरी गद्दार भएँ ? तपाईंको मापनको कडिले कतै ममाथि फेरि अन्याय त गर्नु हुँदै छैन ? सम्झनुस्, प्रचण्डको पछि लागेर सेरबहादुरको चुला चढे नि लाल, कमल थापा बोक्दै हिड्दा पनि लाल, माधवको पछि लाग्दा पनि लाल ।
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन लुकाउदा पनि लाल । एकपटक आखा उठाउनुस् र सोध्नुस् रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन खोइ ? लोकमान र खिलराजको खेल के हो सोध्नुस् । आफु सफल बनुहोस्, मलाई सरापेर आफ्नो इतिहास बनाउने समय खेर नफाल्नुस् । माया गरेर राख्ने र माया गरेर सराप्ने सबैलाई धन्यवाद ।
तपाईंहरु जस्तै म पनि मेरो जीवन खोजिरहेछु। मलाई जेल लादा चु गर्नसमेत गर्न नसक्ने । पार्टी एकता गरेर अपुतली खाने आसमा कुनै कमिटीमा मेरो नाम लेख्न नसक्ने । क प्रचण्ड अपुतलीको आस टरेपछि र आफ्नो जागिर गएपछि चिसो सडकमा पलेटि कस्दा म साथी बन्न सकिनँ। साथीहरू अर्कोलाई गद्दार भन्दैमा आफू लाल बनिदैन । लाल बन्नेतिर लाग्नुस् मेरो शुभकामना छ। तपाईं सफल, लाल जन प्रिय बन्दा म तपाईंको फ्यान बनूँला ।